गाडी भाडामा मनोमानी किन ? - Samadhan News
गाडी भाडामा मनोमानी किन ?
समाधान संवाददाता २०७६ साउन २१ गते १२:०३
पोखरामा गुड्ने यात्रुवाहक सवारी साधनमा मनलाग्दी ढंगले भाडा असुल गरिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विद्यार्थीले माग गरेका छन् । नेकपा निकट अनेरास्ववियु कास्की नेता शेखर गौतमको नेतृत्वमा गएको विद्यार्थी टोलीले सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई यस्तो माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधनमा यसअघि प्रदान गर्दै आएको ज्येष्ट नागरिक, अपांगता भएका, विद्यार्थी र जनआन्दोलनका घाइते लगायतलाई दिइएको छुट कायम राख्न माग गरिएको छ । पोखरामा चल्ने माइक्रो र ट्याक्सीले यात्रु ठग्ने गरेको तथ्यसहित उपस्थित विद्याथीले लामो समयसम्म यातायात क्षेत्रमा अनुगमन नगरिएकोमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यात्रुसँग १० किलोमिटरको दुरीमा ४० रुपैयाँसम्म भाडा असुल गरिएको, पोखरादेखि काठमाडौंसम्मको भाडा दर ४ सय २८ रुपैयाँ रहेकोमा २ हजार २ सयसम्म यात्रुले तिर्नुपर्छ । डिलक्स र सुपर डिलक्स बसले त्यसको २० प्रतिशतसम्म थप लिन पाउनेमा व्यवस्था छ । ट्याक्सीले मिटरमा उठेको पैसा नभई बार्गेनिङका आधारमा पैसा असुल्ने गरेको हुँदा यसो गर्नेलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
नेता गौतमले लामो दुरीको यातायातका साधनमा अनिवार्य २ जना चालक राख्नुपर्नेमा नराखेको पाइएकाले यस्ता सवारी साधनको रुट परमिट खारेज गर्न माग गरे । उनले अनुगमन गर्ने निकाय चूप बस्दा व्यवसायीले मनोमानी ढंगले भाडा उठाइरहेको दाबी गरे । गौतमले भने, ‘यसलाई सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरोस् नत्र विद्यार्थी चूप बस्दैनन् ।’
ज्ञापन पत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले यातायात क्षेत्रमा धेरै नै समस्या रहेको स्वीकारे । ट्याक्सीमा मिटर चलाउनेदेखि धेरै समस्याका बारेमा व्यवसायीसँग छलफल गर्दा पनि निकास ननिस्केकाले नयाँ ढंगले समाधानको उपाय खोजिने उनको भनाइ छ । अबको एक हप्ता भित्रमा समस्या हल गर्न ठोस कदम चालिसक्ने उनले प्रतिवद्धता गरे ।